के अर्पण फ्लप फिल्मका हिट डिरेक्टर हुन् ? – Mero Film
के अर्पण फ्लप फिल्मका हिट डिरेक्टर हुन् ?
अभिनेता अर्पण थापालाई मुखौटा फिल्मबाट निर्देशक बन्ने सोच आयो । उनले नयाँ निर्मातालाई नयाँ फिल्मका लागि लगानी गर्न कन्भिन्स पनि गराएका थिए । मुखौटा फिल्म हेरेपछि अर्पण थापा कलाकार नै भएको ठिक भनेर दर्शकले भने । उनले अभिनय राम्रो गर्छन् ।
अर्पण थापालाई भने निर्देशक बन्ने भूत सवार नै थियो । उनले आधा लभ र सुनकेशरी सिनेमा बनाए । दुबै फिल्मबाट उनले निर्देशनमा हाइहाइ पाएनन् । बरु सुनकेशरीलाई हरर भनेर हसाँउने फिल्म बनाएको भन्दै उनको आलोचना ठूलो भएको थियो । अर्पण थापा रोकिएनन् ।
अर्पण थापाले निर्मात्री शर्मिला पाण्डेको फिल्म निर्देशन गर्दैछन् । दिपेन्द्र के खनाल र शर्मिलाले मिलेर बनाउने घर फिल्मको निर्देशक अर्पण नै हुन् । शर्मिला पाण्डे जस्तो निर्माता पाउनु अर्पणका लागि ठूलो कुरा हो ।
तर, अर्पण थापाले फ्लप फिल्म निर्देशनमा ह्याट्रिक गरिसकेका छन् । अब, फेरि उनले घर फिल्म निर्देशन गर्दैछन् ।
अर्पण थापाले निर्मातालाई कसरी कन्भिन्स गर्छन् होला ? शर्मिला पाण्डेको घर उनले नविगारुन् । तर, उनी फ्लप फिल्मका हिट निर्देशक हुन् भन्दा के फरक पर्छ र ?
२०७५ पुष १२ गते १०:०१ मा प्रकाशित
अमेरिकामा मनाईन् सुहानाले आफ्नो २३ औँ जन्मदिन
वर्षा राउत कोरोना संक्रमित
प्रियंकालाई शुभचिन्तकको प्रश्न ? सेलिब्रेटीले भुँडी मात्र देखाउने होइन, सन्देश मुलक कुरा नि दिनुपर्यो’
मोडल रश्मीले सुटुक्क लगनगाँठो कसेर उडिन् अमेरिका (फोटो फिचर सहित)
‘बुटवल बसपार्क’ मा जिबेस र याङ्सु
पेपराज र सुनियताको ‘चो?लुङ पार्क’सार्वजनिक
ओहायोबाट प्रेमले ल्याए ‘चोली तिम्रो’ ( भिडियो )